Lucre, Cuzco, Peru
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguWilfredo
· Amagaumbi okuhlambela ayi-9.5
Yonwabela umtsalane wale mihla kunye nendalo yale ndawo yokuhlala ihlaziywe ngokupheleleyo, iindawo eziluhlaza ezitofotofo ukuze uphumle, iindawo ezintle zomhlaba, imozulu engaqhelekanga nje imizuzu engama-30 ukusuka eCusco.
Ukongeza kwinkonzo eya kukwenza uzive njengosapho olunokutya okumnandi okuya kukwenza uzive usekhaya.
I-4400 m2 phakathi kwemithi yeziqhamo kunye nezityalo ezintle zeentyatyambo ngaphakathi nangaphandle, onke amagumbi anebalcony yawo enemibono yokuphumla kunye nokuqhawula kuxinzelelo lwesixeko. Indawo ezolileyo kakhulu kwaye ezolileyo phakathi kwendalo engafanele iphoswe.
1 ibhedi elala abantu ababini, iisofa eziyi-2
intlambo ekufutshane kakhulu kwisixeko saseCusco nje imizuzu engama-30. Izitrato ezinemifanekiso kunye nesikwere, elunxwemeni lwechweba laseHuacarpay, ngaphakathi kwesekethe yezinto zakudala zasePikillaqta, ezifanelekileyo ukubaleka esixekweni.
Umbuki zindwendwe ngu- Wilfredo